Philips HR2104 Blender | Buy online | SHOP.COM.MM
Includes filter, mill and chopper
Holds generous amount
Very happy with this Philips blender after3weeks of daily use. The top is very light but holdsagenerous amount of liquid. Read more Hide
ကြိတ်တဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့အပိုပစ္စည်းလေးတွေပါ တစ်ခါတည်းပါပြီးသားမို့ ပိုအဆင်ပြေတယ်လို့။ ကြိတ်တာမြန်ပြီး အဖတ်မကျန်အောင်လည်း ကြိတ်ပေးတယ်။ ဖြုတ်ပြီး ဆေးရပြုရလည်းလွယ်ကူတယ်။ Read more Hide
Philips brand ဆိုရင်အားလုံးကောင်းပါတယ်။ အရည်အသွေးလည်း စိတ်ချရတယ်။ ပစ္စည်းလည်းကောင်းတယ်။ Read more Hide
Specifications of HR2104 Blender